Shandong Isinikezeli Pte Ltd.
Gcina imali kubuchwephesha bobuchwephesha bokukusebenzela
Iinjineli zethu ezifanelekileyo kakhulu kwihlabathi liphela zisebenzisa izixhobo zakutshanje kunye neetekhnoloji ukwenza ngokwezifiso iprojekthi yakho yokwakha ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Iqela lethu le-Topower lonwabile ukuxoxa ngakumbi nawe.
Ubalo lokudlulisa ubushushu
Sebenzisa isoftware esemgangathweni yeshishini, iinjineli zethu zinokuqinisekisa ukuba ulwelo lwakho eliyinjubaqa luyahlangabezana neemfuno zakho zobushushu bomhlaba obandayo kunye neemeko zokusebenza.
Iinjineli eziphezulu zisebenza ngokusondeleyo kunye nawe ukwandisa ixabiso kunye nokusebenza ngokweemfuno zakho ezithile zokusebenza. Ukongeza kwipotifoliyo yethu yemveliso ehlanganisiweyo, kuba siqhelene nezitena ezahlukeneyo, iifayibha, iiankile kunye nezinye izixhobo, unokuqiniseka ukuba ulwelo lwakho lwenkunkuma luphezulu.
Ishedyuli yokomisa iprojekthi ethile
Kuba ukomisa okufanelekileyo kubalulekile kubomi beenkonzo ze-linings eziphikisayo, iinjineli zethu ezinamava zinokwandisa ishedyuli efanelekileyo yokomisa kuwe, yokonga amandla kunye nokuphucula ukuthembeka kwezinto ezitshutshisayo.
Ixesha lokuposa: Mar-10-2021